Indlela esiphatha ngayo tracheitis
Tracheitis - isifo ovamile, ikakhulukazi ngenkathi ezibandayo, njengoba emphinjeni wakhe echayeke ezifweni ezihlukahlukene futhi hypothermia. Okokuqala, igciwane lingena ulwelwesi lwamafinyila we umphimbo, kodwa uma ungenayo ukwelapha lesi sifo kulesi sigaba, uwela kuqhoqhoqho. Ngakho-ke, ukuhlakulela tracheitis. Khona-ke, ukukhwehlela uqala bakitaza emphinjeni nokunye. Indlela esiphatha ngayo tracheitis? Kunezinhlobo eziningana. Okungcono kakhulu, yebo, bonana nodokotela wakho. Kodwa ungaya enye indlela, isibonelo, iphendukele imithi yendabuko.
Lesi sifo livela ngezindlela ezimbili: oyingozi futhi ezingalapheki. Ifomu acute ngokuvamile eyenziwa ngokuhlanganyela nezinye izifo ezifana laryngitis, rhinitis, nokunye. A okungamahlalakhona, esikhundleni salokho, sibangelwa oyingozi. Kuyaziwa ukuthi isifo esingelapheki kuyaqabukela kungenzeka ukuthola ngokuphelele lahlani ezaziwayo, ngakho ekwelapheni of tracheitis acute kuyinto kusheshe futhi kube lula.
Njengoba kushiwo ngaphambili, tracheitis ngokuvamile kwenzeka ngenxa Ukungena igciwane lohlobo. Nokho, ngaphezu kwalokho, lesi sifo ongase aphathwe yisifo ngenxa ephefumula umoya nge nothuli oluningi, umoya abandayo noma ezomile nokunye. Esinye isizathu esingenza kube ezahlukene izifo zamaphaphu noma inhliziyo.
Ingabe usola ukuthi une tracheitis, indlela yokuphatha kulo akazi, ngakho ufunda.
Futhi tracheitis oyingozi futhi ezingalapheki ziphathwa ngokulinganayo. Njengoba uhlobo lesi sifo zingase zihluke kakhulu, ukuze baqonde indlela yokuphatha tracheitis, udinga ukubona kahle ukuthi kwabangela isifo. Iqiniso lokuthi ekwelapheni fungal kanye ezibangelwa amagciwane nezifo ngezinye izikhathi ziyahlukahluka. Nokho, ulwazi olumayelana nendlela aphathe tracheitis Kulezimo anganika udokotela. The njalo kunazo ebekiwe antibiotic, kodwa ngezinye izikhathi ungenza nje antivirals.
Kodwa ungalokothi uweye izindlela zesintu yokwelashwa, njengoba e yezifo ipheshana zokuphefumula ngokuvamile laba basebenzi libe nethonya elikhulu futhi kukusize kangcono ekwelapheni.
Indlela ephumelela kakhulu futhi ethandwa indlela ekulweni izenzo tracheitis garlic. Udinga lisicole anyanisi ku amakhowe, futhi sikwazi ukuphefumula ngokusebenzisa cheesecloth. Enye indlela ezinhle tincture uju kanye isithombo. Phuza kufanele kube kathathu ngosuku, okungcono emva kokudla. ngempumelelo kakhulu uhlambulule ahlukahlukene. Kungaba tincture raspberry leaf futhi marigold, no-anyanisi ikhasi, nokuningi. Kuhle kakhulu usizo ephefumula amakhambi ahlukene. A tincture jikelele - zikagamthilini. It angasetshenziswa uma uhlambulule umphimbo ephefumula, ngisho baphuze.
Futhi in wendabuko imithi ngokuvamile zisebenzisa amajikijolo. Ukuze uthole okungcono maduze, kudingeka bahlale baphuze itiye yakhiwa ngamahlamvu zalesi sitshalo. Ukuze wenze lokhu, ubilise ezimbili wezipuni amaqabunga isigamu ilitha lamanzi abilayo. Vumela ihora sokunika, ubunzima futhi ungakwazi baphuze.
Kodwa ushiya lesi sithelo emangalisayo, ungasebenzisa elisuka oda efanayo. Okuhle gaya izimpande futhi uthathe kubo wezipuni ezimbili. Thela amanzi abilayo bese ugcine on ukushisa low imizuzu engaba yishumi. Ngemva kwalokho, yeka imithi kuze kuphele amahora amabili, khona-ke kube nzima futhi baphuze izibuko ezintathu ngosuku.
Tracheitis, njenganoma iyiphi enye isifo ukuthi kwenzeka lapho izimo ezivuna amagciwane. Ngakho-ke, uma ungafuni ukuba ogulayo, kudingeka ulandele iziqondiso ezithile. Ukuze zokuvimbela kuyadingeka kaningi ngangokunokwenzeka ukwenza yokuhlanza ezimanzi ekhaya, kungangeni moya kufanele ahlale omile. Njalo pholisa igumbi lapho ukhona, umoya kumele aluka. Ukuzivocavoca, ulaka, isiphuzo amavithamini nokunye. Futhi okubaluleke: izingubo kufanele igqoke zihlale isizini.
Lesi sihloko sinikeza abanye izincomo ezivimbayo futhi ngezinga elithile esewuphendula sendlela yokuphatha abanye tracheitis. Kodwa abantu wokuqala ebhekene nale nkinga futhi kufanele uqale uxhumane nodokotela wakho.
Lapho mammograms futhi kanjani uzilungiselele wona?
Indlela esiphatha ngayo ukukhwehlela phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Isethi umzimba fizkultpauzy: ongakhetha elula
Izinja ngokumitha kwemihlambi ngaphakamisa ngalokho usuku estrus wachitha? Ngasiphi yobudala kungaba obumbene inja?
Beautiful ukumenyezelwa uthando amadoda.
Empiricist - Iyini? eziyisisekelo
Ummbila isobho: ukupheka zokupheka kanye nezici